Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 27)
Ugbu a na-egwu Beta Free Music Player
Ugbu a na-egwu egwu bụ ihe ọkpụkpọ egwu ọhụrụ maka gam akporo dabere na koodu isi nke Apollo Music Player.
Etu esi etinye Facebook Home na ngwaọrụ ọ bụla
Homelọ Facebook dị maka ụdị ngwaọrụ niile, yana mgbanwe Katana.
Etu ị ga-esi ewepu ụdị ọhụụ nke Play Store 4.0.25
Mfe nkuzi iji laghachi na ụdị nke ngwa ngwa gam akporo, Storelọ Ahịa Play 4.0.25
Etu esi ewepụ ọnụ gị naanị site na ịpị otu pịa
Ngwa dị na Storelọ Ahịa Play nke na-enye anyị ohere Un-Root ụdị ụdị gam akporo ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị ma ọ bụ ụdị nke gam akporo.
Etu ibudata ma wụnye ụdị ọhụụ nke Storelọ Ahịa Play.4.0.25
N'ebe a, anyị hapụrụ gị ụdị Google Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa Play.4.0.25 ọhụrụ, anyị gụnyere nkuzi vidiyo na ntinye ya na ojiji ya.
Etu esi eji abụ ọ bụla dịka ụdaolu ndabara
Ọzọ nkuzi maka gam akporo nke anyị ga-amụta ịgbanwe ụdaolu ndabara maka isiokwu ọ bụla na ọba akwụkwọ egwu anyị.
Ntọala niile nke ngwa Gmail maka ngwaọrụ gam akporo, na vidiyo nkọwa dị mma.
Etu ị ga - esi bulie ebe nchekwa RAM na ngwaọrụ gam akporo
Nkuzi iji bulie ebe nchekwa RAM nke gam akporo anyị n'agbanyeghị ụdị nke gam akporo.
Otu esi eme ka ngwa ngwa nke ihe nhazi anyi
Mfe nkuzi iji gbanwee ihe kachasị na ụkpụrụ kacha nta nke ndị nhazi anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Android vs. iOS, gịnị kpatara ịhọrọ gam akporo?
Na ọgụ nke gam akporo megide iOS ndị a bụ ihe dị iche iche nke, n'uche nke m, na-enye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gam akporo sistemụ dị ka onye mmeri doro anya.
Etu esi nye ọdịdị nke iPhone na gam akporo gị
Ngwa abụọ dị na thelọ Ahịa Play nke anyị ga-eji gosipụta Apple iPhone na-efunahụ uru nke gam akporo anyị.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara android ROMs
Taa, m ga-ekwu maka gam akporo ROMs, gini ka ha bụ? , Uru na ọghọm na otu ...
Nkata Isi, jiri Facebook Messenger mee ngwa ọ bụla
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ bụ isi nke Facebook Home bụ Isi Nkata, ngwa ọrụ ga-enye anyị ohere iji Facebook Messenger site na ngwa ọ bụla.
Samsung Galaxy S, Neon Kernel V 0.3 maka gam akporo 4.2.1 na nkwado OTG
Esi gbanwee kernel na Samsung Galaxy S n'okpuru gam akporo 4.2.1 esiri rom
Etu esi wụnye mgbake na mgbọrọgwụ na Samsung Galaxy S2 Hercules T989
Nkuzi iji mee mgbọrọgwụ ma gbanwee mgbake na Samsung Galaxy S2 Hercules model T989.
Budata ụmụ amaala Sony Xperia Z
Ngwunye nke ngwa ala nke Sony Xperia Z ka ịgbanye site na mgbake dị mma maka ọnụ ọgụgụ dị mma nke ọnụahịa gam akporo
Xperia U, Mod Dị ọcha AOSP UI
Taa, anyị wetara gị Mod iji wụnye ọnọdụbarị na menu ntọala AOSP na Sony Xperia U. Site na nke a, anyị nwere ike ịlele igwe ekwentị anyị.
Esi gbanwee SIM Pin site na ngwaọrụ gam akporo
Nyere aka ịnweta usoro nhọrọ ịgbanwe PIN Pin site na ngwaọrụ gam akporo gị.
Kpọtụrụ ngosipụta nhọrọ
Ọhụrụ a video nkuzi m na-akụziri gị ịchịkwa ngosipụta nhọrọ nke kọntaktị na gam akporo sistemụ
DivX Stash, mepụta listi ọkpụkpọ na egwu sitere na Internetntanetị
A na-arara DivX Stash n'ụzọ pụrụ iche maka ndị niile na-etinye egwu na Internetntanetị, na-enweghị ibudata ya na kọmputa.
Taa, anyị ewetara gị Mod Pack maka Sony Xperia P iji nye ya ọdịdị nke Sony Xperia Z yana ngwa ya na ọrụ ọ na-eweta. Bịa na-agbalị.
Olee otú ndabere Ngwa na unyi
N'ime nkuzi ohuru a, m na-egosi gị otu esi eme nkwado nke ngwa niile na data ha site na iji Carbon, ngwa anaghị akwụ ụgwọ.
Chaja batrị hà nke kaadị akwụmụgwọ
Batrị chaja na-adọrọ mmasị nwere atụmatụ nke $ 25 kaadị akwụmụgwọ ka emebere na nso nso a.
Etu esi eji gam akporo ngwa ahịa sitere na PC, Google Play
Google Play bụ nsụgharị weebụ nke ụlọ ahịa ngwa ngwa gam akporo Play Store, na usoro ntụpụ ụkwụ a anyị gosiri gị otu esi eji ya n'ụzọ ziri ezi.
Ekwentị mkpanaka pụtara na batrị 5000 mAh
Ekwentị mkpanaka ndị China na-atụ aro ihuenyo 4.5-inch na batrị 5000 mA, na-ahụ na ọ ga-adị gịrịgịrị ka ndị ọzọ.
Jelii agwa pụrụ iche Download maka Samsung Galaxy S2
Samsung na-atụ aro iji kwalite Samsung Galaxy S2 n'ụzọ dị mfe iji jelii agwa site na iji kọmputa Windows 7.
Etu esi lelee Twitter na ọnọdụ PC site na ekwentị mkpanaaka gị
Ihe dị mfe iji lelee ibe Twitter na ụdị desktọọpụ nke desktọọpụ, nke bụ otu ụzọ ị nwere ike isi hụ ya na kọmputa gị.
Ọfọn, taa, ewetara m gị ngwa 6 ndị ọzọ, ụfọdụ siri ike ijikwa ma nwekwaa ihe egwu ...
Xperia S, Rom XS B-versionlọ nsụgharị 5.1
Taa, anyị na-ewetara gị 5.1 nke Elroysde XS B-Room mbipute maka Sony Xperia S, dabere na ụlọ ọrụ Sony kachasị ọhụrụ nke jupụtara na nhazi na ọmụmụ.
Otu esi emepụta Gmail akaụntụ site na ngwaọrụ gam akporo gị
Ihe nkuzi ohuru maka ndị ọrụ mbido na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo anyị ga - eji mepụta akaụntụ Gmail ọhụụ site na ntinye.
Otu esi eji ngwaọrụ ndị ọzọ ekerịta njikọ data gị
Video nkuzi kọwara nzọụkwụ site na nzọụkwụ iji kesaa njikọ data gam akporo gị na ngwaọrụ ndị ọzọ.
CyanogenMod Nightlies na-etinye PIE Control
Ndị mmepe CyanogenMod ekpebiela itinye PIE Control n'ime nsụgharị abalị nke roms ha.
Google Translate emelitere iji nye ọnọdụ na adịghị n'ịntanetị
Na mmelite ọhụrụ a nke Google Translate, a na-etinye ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị ka ọ ghara ịchọ njikọ data nọ n'ọrụ.
Sony Xperia Z, RomAur Mmelite Version 1.4.1
Taa, anyị na-eweta RomAur v1.4.1 ROM site na onye isi nri Auras76 maka Sony Xperia Z, dabere na ụlọ ọrụ Sony kachasị ọhụrụ nke juputara na nhazi na oke mmiri.
Samsung Galaxy S4, ihe onyonyo dị maka nbudata
Anyị enweworị sistemụ usoro ma ọ bụ ihe oyiyi zuru ezu nke sistemu Samsung Galaxy S4 maka nbudata ozugbo
Taa, anyị na-ewetara gị Divaksh's JB eXperience ™ v2 maka Sony Xperia U, dabere na ụlọ ọrụ Sony kachasị ọhụrụ nke jupụtara na nhazi na oke mmiri.
Samsung Galaxy S, mbufịt X rom update version 4.7
Anyị nwere ebe a ụdị nke kachasị nke roms kachasị nke oge maka Samsung Galaxy S, V4.7 mbipute nke Rom Tsunami X.
Nsogbu nchebe dị egwu na Sony Xperia Z
Achọpụtala ihe nchebe na-enye ohere ịnweta ngwaọrụ Sony Xperia Z akpọchiri n'enweghị nnukwu nsogbu.
Sony Xperia Z mkpọchi na Xperia P gị
Wụnye Sony Xperia P gị na mkpọchi mkpuchi nke Sony na-eweta jelii agwa na Sony Xperia Z, nye ekwentị gị aka mara mma na nke oge a na mod a
Etu esi wụnye Line na kọmputa gị
Ntụziaka dị mfe iji nweta Nbudata n'efu ma wụnye na kọmputa gị. Gụnyere video ntuziaka site na iji zoo.
Samsung Galaxy S3, Rom ReVolt V 4.0 gam akporo 4.2.2 jelii agwa
Rom ọhụrụ ọzọ maka Samsung Galaxy S3 dabere na koodu isi AOKP yana ụdị gam akporo 4.2.2.
Wụnye Sony Xperia Z launcher na Sony Xperia smartphone gị
Nkuzi maka ntinye nke launcher nke ohuru Sony Xperia Z maka Sony Xperia amaara ama gị, nke anyị nwere ike ịhazi kọlọtọ anyị ọzọ.
Samsung Galaxy S2, rom Vanilla RootBox 3.9.1 gam akporo 4.2.1
Mmetụta mmetụta maka Samsung Galaxy S2 dabere na koodu mmalite nke Vanilla RootBox nke bụ ngwakọta nke kacha mma nke Cyanogenmod na AOKP.
Wụnye Beats Audio na gị Xperia P na Xperia U
Taa, anyị ewetara gị Mod maka ụda nke Xperia anyị, ọ bụ Dre's Beats Audio nke anyị nwere ike iji ihe nha egwu egwu iji nweta ezigbo ụda.
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ịbụ "Nkpọrọgwụ"
Ndewo onye ọ bụla, maka edemede m nke mbụ m kpebiri ịme gị obere nduzi nke ihe ọ pụtara ịbụ "mgbọrọgwụ", na ...
Kacha mma izu na Androidsis
A compendium nke kacha mma isiokwu bipụtara na Androidsis dị ka a nchịkọta nke mere na ị maara nke kasị mma nke izu
Xperia T, Rom Xperia ịmata ihe v2.2
Taa, anyị na-eweta Recoba Xperia Curiosity v2.2 ROM maka Sony Xperia T, dabere na ọkwa kachasị ọhụrụ Sony Jelly Bean firmware na juputara na nhazi.
Jelii agwa melite maka Motorola Electrify 2
Motorola Electlect 2 nwere ike inwe mmelite na jelii agwa gam akporo 4.1 nwayọ nwayọ.
Samsung Galaxy S3, mmelite na-akwadoghị na gam akporo 4.2.2 site na rom
Akpa rom arụmọrụ zuru oke maka Samsung Galaxy S3 nke ga - enyere anyị aka ịnụ ụtọ uru nke gam akporo 4.2.2
Xperia P, Rom jelii ude Xperia Z ịke 2.5
Taa, anyị na-ewetara gị jelii ude Xperia Z ịke 2.5 nke Arthur_1 maka Sony Xperia P, dabere na ụlọ ọrụ kacha ọhụrụ Sony femụwe na juputara na nhazi.
Samsung Galaxy S, rom tsunami 4.6 gam akporo 4.2.2 melite March 14
Nwelite ohuru nke Tsunami X 4.6 rom na Android 4.2.2 maka Samsung Galaxy S Model GT-I9000
Xperia Z, Mgbọrọgwụ na Iweghachite
Ọ bụrụ na ị gbanye mgbọrọgwụ Sony Xperia Z, anyị nwere ike ịwụnye mods dị iche iche, mee nkwado ndabere, wụnye roms na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Samsung Galaxy S4 batrị ga-enwe mgbawa NFC
Ekwenye na Samsung Galaxy S4 ga - enwe NFC. Na mgbakwunye, teknụzụ a ga-abanye n'ime batrị ngwaọrụ ahụ, nke ga-abụ 2600mAh.
Taa, anyị na-ewetara gị Total Xperia V2 ROM sitere na Total Xperia Team maka Sony Xperia U, dabere na ụlọ ọrụ kacha ọhụrụ Sony firmware na juputara na nhazi.
Jelii agwa na Windows 8 na Asus Transformer AIO
Asus Transformer AIO bụ kọmpụta All-in-One nke e gosipụtara na Spain ma gbanwee ghọọ nnukwu mbadamba gam akporo.
Sony Xperia S, Rom Nature Sony XperiaV3 RC
Taa, anyị na-eweta DevSxSTeam NatureXperiaV3 ROM maka Sony Xperia S, dabere na ngwa ọrụ kacha ọhụrụ nke Sony firmware 6.1.A.2.55, ọ jupụtara na nhazi.
Samsung Galaxy S, Rom tsunami X4.5 melite 9/3/13
Ntughari ohuru nke Team tsunami X rom na gam akporo 4.2.2 ma dabere na koodu AOKP maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000
Cyber-shot Mod maka Xperia 2012
Tutorial iji wụnye Mod Cyber-shot Mod maka Xperia igwefoto nke 2012. Mod a na-eweta ndọtị ọhụụ maka igwefoto dị ka ọnọdụ HDR na foto.
Xperia T, Mgbọrọgwụ na Iweghachite na Jelii agwa
Nkuzi iji gbanye ma wụnye mgbake na Sony Xperia T gị na Jelii agwa Na nke a, anyị nwere ike iwunye mods dị iche iche, mee nkwado ndabere, wụnye roms.
Ọ bara uru ịkwụ ụgwọ iji WhatsApp?
WhatsApp kwụsịrị ịnye ọrụ ya n'efu. Iji gaa n'ihu n'iji ọrụ a ị ga-akwụ ụgwọ 0,89 cents kwa afọ, ọ bara uru ịkwụ ụgwọ?
Samsung Galaxy S, Rom gam akporo 4.2.2 Team Remics-JB
Ọhụrụ rom nke Team Remics-JB otu maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000
Xperia S, Mgbọrọgwụ na Iweghachite
Nkuzi iji gbanye ma wụnye mgbake na Sony Xperia S gị n'ụzọ dị mfe. Iji nke a, anyị nwere ike iwunye mods dị iche iche, mee nkwado ndabere, wụnye roms.
Samsung Galaxy S2, HCTRom V6.1 gam akporo jelii agwa 4.1.2
Taa, m na-ewetara gị ihe ngosi dị egwu sitere na ọgbakọ HTCmania maka Samsung Galaxy S2 nlereanya GT-I9100. HCTRom V6.1 na gam akporo 4.1.2 jelii agwa
Samsung Galaxy S3, Rom Purelook HD n'ụdị nke Xperia Z
Ọmarịcha rom na ụdị Sony Xperia Z maka Samsung Galaxy S3.
Xperia U, Mgbọrọgwụ na Iweghachite
Nkuzi iji gbanye ma wụnye mgbake na Sony Xperia U gị n'ụzọ dị mfe. Iji nke a, anyị nwere ike iwunye mods dị iche iche, mee nkwado ndabere, wụnye roms.
Xperia P, Mgbọrọgwụ na Iweghachite
Nkuzi iji gbanye ma wụnye mgbake na Sony Xperia P gị n'ụzọ dị mfe. Iji nke a, anyị nwere ike iwunye mods dị iche iche, mee nkwado ndabere, wụnye roms.
Ọfụma ọhụụ na Samsung Galaxy na gam akporo 4.1.2
Achọpụtala nsogbu ọhụụ na Samsung Galaxy ngwaọrụ na-agba ọsọ Android 4.1.2. Ahụhụ a na-enye ohere ịnweta desktọọpụ isi
TheftSpy - ngwa iji weghachite mobile zuru
Ngwa na-adọrọ mmasị nke ndị mmepe XDA mepụtara n'okpuru aha TheftSpy nwere ike inye aka weghachite ekwentị mkpanaaka ezuru.
Atọ iji gbanyụọ mgbakwunye niile arụnyere na Chrome
Ikekwe n'oge ụfọdụ, mgbe ị wụnye ndọtị na Google Chrome, ihe nchọgharị ahụ amalitela imechi ma ọ bụ nọrọ ...
Ogwe ntụgharị ntụ na-alọghachi na Google, aghụghọ iji rụọ ọrụ ya
A ole na ole gara aga egosiri m gị nnwale Google nke gbanwere ogwe igodo ojii na agba ntụ. Mgbe egosiri gị otu ...
Alien na Predator Evolution, agha ohere na-abịa na mkpanaka
A ọbara ohere njem si ọbịa Ali na Predator aha
Kedụ ka mgbanwe teknụzụ ga-esi metụta ekwentị anyị?
Mgbanwe nke teknụzụ ga-ewe igwe anyị na ọkwa ọhụrụ. Akwụkwọ ọhụrụ isii ga-abata n'ime afọ iri na ngwaọrụ anyị kachasị amasị anyị.
DoCoMo na-egosipụta ngwa ntụgharị asụsụ nke otu oge
Kwa ụbọchị, iwu ọtụtụ asụsụ dị mkpa. N'ime ụwa zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ezie na asụsụ Cervantes bụ ...
Samsung Galaxy S, nke mbụ Ubuntu OS Rom
Anyị nọ ebe a iji nwalee rom ọhụrụ ahụ dabere na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ Canonical Ubuntu OS maka Samsung Galaxy S GT-I9000 anyị.
Mepee Google Chrome mgbe niile kachasị
Ọ bụrụ na ọ na-eme gị dị ka m ma na-amasị gị iji usoro ọ bụla ma ọ bụ windo na-elekarị anya, ma eleghị anya ...
Vanilla RootBox gam akporo 4.2.2 mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri maka Samsung Galaxy S
Ezigbo ihe ebube nke RootBox vanilla rom mkpuchi maka Samsung Galaxy S, yana gam akporo 4.2.2 na PIE Control
Antivirus kacha mma maka gam akporo
Ọ dị ezigbo mkpa idobe ọnụahịa gam akporo anyị ka echedoro ma ọ bụ ọrịa na-enweghị ikike na nje na ...
Vanilla RootBox, Roms Android 4.2.1 dị maka ngwaọrụ dị iche iche
Vanilla RootBox bụ otu n'ime otu ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama nwere naanị karịa Android nke anyị nwere ike ịchọta na usoro roms maka gam akporo ngwaọrụ.
Ibudata ma wụnye keyboard Samsung maka MIUI, ICS na jelii agwa
Tutorial iji wụnye mbụ Samsung Keyboard na MIUI ọ bụla, Ice Cream Sanwichi ma ọ bụ Jelii agwa rom.
Samsung Galaxy S3, Rom Vanilla RootBox gam akporo 4.2.1 na PIE Control
Otu n'ime roms kacha mma maka oge Samsung Galaxy S3, Vanilla RootBox na gam akporo 4.2.1 na PIE Control.
Samsung Galaxy S, CRom Mix V6 gam akporo 4.2.1
The CRom Mix V6 bụ rom na gam akporo 4.2.2 maka Samsung Galaxy S nwere ụdị dị mma nke ọma na firmware mbụ nke Samsung Galaxy S3
Gị akwụkwọ ọkọwa okwu Android, mara okwu eji na Android
Taa, anyị ewetara gị akwụkwọ ọkọwa okwu gam akporo a ka ị nwee ike ịghọta ihe niile metụtara ama na ị nwere ike ịgọnahụ ha na-enweghị obi abụọ ọ bụla.
Nkuzi iji gbanye ngwaahịa ROM ma ọ bụ wepu ya na Sony Xperia gị na ngwa Flashtool. Ndenye na mfe nkuzi.
Chaja ikuku Nexus 4 dị ugbu a na Google Play
Ekwentị Nexus 4 nwere ike ịgba ụgwọ ugbu a na-enweghị mkpa maka eriri ekele maka ngwa dị na Storelọ Ahịa Google
Kedu ihe dị ọhụrụ na gam akporo 4.2.1
Android 4.2.1 dị ebe a. A na-emelite ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na nsụgharị ọhụrụ ka anyị wee kpughere akụkọ banyere ụdị gam akporo a.
Samsung Galaxy S3, Rom ReVolt JB gam akporo 4.2.1
Taa, m na-eweta ụzọ iji melite Samsung Galaxy S3 nlereanya GT-I9300 na ụdị ọhụrụ nke gam akporo, 4.2.1
Samsung Galaxy S3, Mgbọrọgwụ na Iweghachite na gam akporo 4.1.2
Nzọụkwụ nzọụkwụ dị mfe iji gbanye na mgbake mgbake na Samsung Galaxy S3 na ụdị Android 4.1.2
Samsung Galaxy S3, otu esi edozi nsogbu nke ọnwụ mberede
Ọnwụ mberede nke na-emetụta Exynos Chip nke Samsung Galaxy S3 dị mfe nghọta site na isoro usoro ndị a dị mfe.
Motorola Razr m kwalite na jelii agwa na UK
Onye ama ama Motorola Razr i ekwentị na-enweta mmelite ngwugwu maka sistemụ arụmọrụ nke Android 4.1 jelii
Mega ngwa mbu nke Mega: MegaManager
Jikwaa ọrụ nbudata Mega ọhụrụ site na mkpanaka gị na MegaManager, ngwa izizi dakọtara na ikpo okwu gam akporo
Mepee bootloader nke Xperia gị
Tutorial ga-emeghe bootloader nke gị Sony Xperia. Site na imeghe bootloader anyị nwere ike iji ọnụ anyị mepụta ọtụtụ ihe.
Carbon, onye ahịa Twitter ohuru maka gam akporo
Carbon bụ otu n’ime ndị Twitter kachasị mma ma dị irè maka gam akporo ugbu a maka nbudata na Playlọ Ahịa Google.
Nexus 4, Unlock, Mgbọrọgwụ na Iweghachite maka Nọmba
Nzọụkwụ nzọụkwụ na-adị mfe inweta Unlock, Root and Recovery on Google Nexus 4
Download ndepụta okwu maka vidiyo YouTube
Otu n'ime ọtụtụ nhọrọ YouTube na-enye anyị bụ ịgbanye ndepụta okwu na vidiyo ndị anyị bugoro. Ọ bụrụ na ụfọdụ ...
Samsung Galaxy S, Rom Galaxy Nexus gam akporo 4.1.2 RC2 site Elitemovil
New version nke kacha mma rom nke oge maka Samsung Galaxy S, na RC2 nke Galaxy Nexus si Elitemovil, A gam akporo 4.1.2
Mmanya ga-enye gị ohere ịgba ọsọ mmemme Windows na gam akporo gị
A maara nke ọma na mmanya Linux ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere ịwụnye ngwa Windows na nkesa a n'efu. Na Wine chọrọ ịbịaru gam akporo.
Capptura na-eme ka ị mata ma ọ bụrụ na mmadụ anwaa imepe ekwentị gị
Capptura bụ ngwa Spanish nke na-ezitere gị foto, were ya na igwefoto n'ihu ekwentị gị, ọ bụrụ na mmadụ anwaa imeghe ya
Samsung Galaxy S, Otu esi agbanwe dpi na Elitemovil rom kacha ọhụrụ (RC1 na RC2)
Ntụziaka dị mfe na onyonyo ma nzọụkwụ site na ụkwụ iji gbanwee dpi na Elitemovil rom nsụgharị RC1 na RC2 kachasị ọhụrụ, maka Samsung Galaxy S
X-Plane 9, ihe simulator na ikuku na-atọ ụtọ maka gam akporo
Egwuregwu ụgbọ elu ziri ezi, budata X-Plane 9 n'efu ma chịa mbara igwe
Gbanyụọ incognito na Google Chrome
Taa, m wetara gị aghụghọ iji kwụsị ọnọdụ inognito nke Google Chrome gụnyere. Ọ bụrụ na ị nwere ike izere ...
WindowsAndroid, ụzọ kachasị mma iji Androidomie gam akporo
WindowsAndroid bụ ngwa na-atọ ụtọ i toomi Android 4.0 na sistemụ arụmọrụ Microsoft
Samsung Galaxy S, Rom gam akporo 4.2.1 ọdụ ụgbọ mmiri del Nexus S RC1 site Elitemovil
Taa, achọrọ m ịkekọrịta gị niile kacha mma gam akporo 4.2.1 Rom na enwere m obi ụtọ iji nye Samsung Galaxy S, ụdị RC1 nke elitemovil
Anyị nwere ohere maka nbudata maka Samsung Galaxy S nke kachasị atụ anya n'oge a, nke Team Tsunami X 4.2 na Android 4.2.1
Samsung Galaxy S, nchịkọta nke modem
Ndepụta nke modem zuru ezu maka Samsung Galaxy S, dị mma maka ROM niile dabere na MIUI ma ọ bụ Cyanogenmod.
Samsung Galaxy SCL, Rom EhnDroix II gam akporo 4.1
Otu n'ime roms kacha mma maka Samsung Galaxy SCL Model GT-I9003 yana ntinye nwụnye na nbudata maka ya.
Gbanyụọ Aero Glass na Google Chrome
Google Chrome nwere bọtịnụ zoro ezo nke na-enye anyị ohere iji rụọ ọrụ ma gbanyụọ Aero Glass na ihe nchọgharị ahụ, ebe ị nọ ...
BlueStacks emulator na-abịa Windows 8
BlueStacks bụ ike emulator maka ị na-agba ọsọ gam akporo ngwa na-arụ ọrụ ugbu a na Windows 8
Samsung Galaxy S, Rom RemICS-JB V2.0 gam akporo 4.2.1
Usoro nwụnye na nbudata nke ụdị ọhụrụ nke kacha mma gam akporo 4.2.1 rom maka Samsung Galaxy S, RemicS JB V2.0
Samsung Galaxy S2, Rom SuperNexus V2.0 wuo 1 gam akporo 4.2.1
The Rom SuperNexus V2.0 maka Samsung Galaxy S2 bụ otu n'ime ndị ọhụrụ ROMs bipụtara na xdadevelopers na gam akporo 4.2.1
Jelly Bean melite mara ọkwa maka Samsung Galaxy S2 na ọnwa ọzọ
Samsung Galaxy S2 nwere mmelite na gam akporo 4.1.2 site na Samsung Kies sistemụ na mbido ọnwa Febụwarị.
Samsung Galaxy S3, Fenixer Rom V12 gam akporo JB 4.1.2
Site na HTCmanía na n'aka Fenixer na-abịa nke a dị ịtụnanya nke rom maka ụdị Samsung Galaxy S3 GT-I9300 na gam akporo jelii agwa 4.1.2
Samsung Galaxy S, Rom Vortex 0.5 site na Team tsunami gam akporo 4.2.1
Vortex 0.5 rom bụ nke kachasị ọhụrụ sitere na Team Tsunami team na-agba gam akporo 4.2.1 maka Samsung Galaxy S Model GT-I9000.
WhatsApp nabata ịkwụ ụgwọ Google Play ugbu a
Ọrụ ịkwụ ụgwọ nke ụlọ ahịa Google Play na-arụ ọrụ ugbu a site na nchịkọta dị mfe n'ime ngwa WhatsApp
Ekwentị Ubuntu, Canonical iji merie Smartphones
Ekwentị Ubuntu bụ nzọ nke Canonical n'ụdị sistemụ arụmọrụ maka Smartphones na smartphones nke a na-atụ anya na ọ ga-abụ oge nke oge ahụ.
Samsung Galaxy S, CreedRom V13 gam akporo 4.2.1 CM10.1
Mmelite ohuru nke rom a di egwu na Android 4.2.1 maka Samsung Galaxy S ihe nlereanya GT-I9000.
Google na ndepụta nwere egwuregwu kachasị mma nke 2012
Google gosipụtara ndepụta nke egwuregwu kachasị ebudatara na gam akporo na 2012, ihe ịtụnanya na egwuregwu nke amaralarị akara afọ
Samsung Galaxy S, Rom Team RemICS-JB gam akporo 4.2.1 V1.0
Gam akporo 4.2.1 rom site na Team RemICS-JB team maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000.
Samsung Galaxy S3 na-enweta batrị gbatịrị na Jenụwarị
High-ọgwụgwụ ekwentị Samsung Galaxy S3 ọkọkpọhi a ọhụrụ akp batrị
South Korea ga-acho iwekota ngwa nche na mobiles
Site na ijikọ sọftụwia pụrụ iche, South Korea na-atụ aro ndị nrụpụta ekwentị ka ha zere iji ike emegbu mmadụ.
Jiri Emma gbanye Sony Xperia mfe
Emma bụ obere ngwa gam akporo anyị nwere ike iji gbanye igwe Sony Xperia anyị.
Download gam akporo 4.1 ROM maka HTC One X
Nwere ike ibudata jelii agwa gam akporo 4.1 mbipute nke European version of HTC One X ekwentị mkpanaaka.
Samsung Galaxy S, Rom VorteX 0.0 gam akporo 4.2.1 sitere na Team tsunami
Rom na gam akporo 4.2.1 sitere na otu tsunami maka Samsung Galaxy S dabere na CyanogenMod 10.1
Samsung Galaxy S, Rom Beast 4.2.1 na Linaro Ngwá Ọrụ
Rom na ụdị ọhụrụ nke gam akporo 4.2.1 na Linaro 4.7 koodu maka Samsung Galaxy S
Iberi keyboard - kiiboodu nke na-ewe oke iwe maka ndị ọrụ gam akporo na ndị egwuregwu
Iberi kiiboodu bụ ihe na-akpali gam akporo ngwa na-arụ ọrụ na mbadamba si 7 sentimita asatọ gaa n'ihu, dochie ot mebere kiiboodu.
Samsung Galaxy S, CreedRom V11, gam akporo 4.2.1
Ntughari ohuru nke CreedRom, nọmba nke oge a 11 na gam akporo 4.2.1 maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000
Samsung Galaxy S, ndị isi Rom Android 4.2.1 Alpha 2 site Elitemovil
Mmelite kacha ọhụrụ nke rom na Android 4.2.1 sitere na Elitemovil maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000
Batrị ọhụrụ nwere ike ugboro abụọ maka Samsung Galaxy Note 2
Ejirila batrị ohuru nwere ike gbatitara okpukpu abụọ nke Samsung Galaxy Note 2 kemgbe December 21, 2012.
Lenovo P770, 29 awa nke batrị na-arụ ọrụ
Lenovo P770 bụ Smartphone maka ọrịre n'ahịa ndị China maka ihe dịka $ 270, nke isi ihe dị na ya bụ ndụ batrị 3500mAh.
Samsung Galaxy S, Creed Rom V10 gam akporo 4.2
CreeRom V10 bụ otu n'ime roms kachasị arụ ọrụ dabere na gam akporo 4.2 maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000.
Samsung agakwaghị enye batrị Apple batrị
Mmekọrịta Samsung kwụsịrị na nkwekọrịta nke nkwekọrịta nyere ya ohere imepụta batrị maka mbadamba na ngwaọrụ Apple ndị ọzọ.
Mbido na ụdị nke Windows 8 na n'efu
A free launcher na purest Metro ịke nke Windows Phone 8 maka gam akporo gị ga-enye gị mgbanwe nke ikuku ọhụrụ
PlaceRaider, malware nke Pentagon haziri
PlaceRaider bụ ngwa nke Pentagon haziri na nke na-ese foto na igwefoto gị na-emegharị gburugburu gburugburu ebe atọ.
Samsung Galaxy S, Rom gam akporo 4.2 si Elitemovil Alfa
New rom na Android 4.2 maka Samsung Galaxy S nke onye siri nri nke HTCManía elitemovil na ndị otu mmepe ya
Motorola RAZR HD na RAZR MAXX HD Nwere ike Jnweta Jelii Bean n’oge na-adịghị anya
Motorola na-akwadebe mmelite ahụ na gam akporo 4.1 jelii agwa nke smartphones ndị bụ isi, ụdị RAZR HD na RAZR MAXX HD na anya
Mbadamba ụrọ - Kedu nke na-abawanye uru?
Mbadamba mbadamba na ihe ohuru, na nke a nke ire ere banyere mmekọ ọnụahịa nke ngwaọrụ ọ bụla
Ihe omuma a: Google na Apple na Microsoft
Google na sistemụ arụmọrụ ya na-eche usoro ọhụrụ nke patent mkpesa site n'aka Apple na Microsoft na United States
Samsung Galaxy S, Rom tsunami X3.3 ọhụrụ melite
N'ebe a, anyị nwere ụdị ọhụụ nke ihe kachasị mma jelii agwa maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-i9000
Nsogbu njikọ WhatsApp na Movistar
WhatsApp bụ, dị ka Movistar si kwuo, ọ bụ maka ọdịda nke usoro ahụ na November 5, olee ihe ndị ụlọ ọrụ ga-eme iji gbochie ọdịda ọhụrụ?
LIFX, bọlbụ eletriki ọhụrụ nke Android na-achịkwa
Enwere ike ịchịkwa bọlbụ LIFX ọhụrụ site na mkpanaka, na-enye nkasi obi na ịdị mfe iji hazie nchapụta, iche na mgbanye mmemme.
Samsung Galaxy S, Rom F1 Galaxy SII V8 Ikpeazụ Beta XXJVU
Nke a bụ Gingerbread gam akporo 2.3.6 rom na ngwa mbụ niile maka Samsung Galaxy S, redio mbụ, igwefoto mbụ na Samsung Apps.
Android 4.2 na-achọ ịda. Anyị na-ewetara akụkọ ya niile
Na mbata nke gam akporo 4.2, ekpughere ozi niile nke ụdị ọhụụ kachasị nke sistemụ arụmọrụ Google na-aga nke ọma.
Android nsụgharị na nrụnye ọrụ ha
Ọbụna ịhapụ ụdị ọhụrụ nke gam akporo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke ngwaọrụ ndị dị ugbu a ka dị na Gingerbread.
Google Nexus 7, Rom gbara agba V2.1 gam akporo 4.1.2
The Rom glazed V2.1 bụ ROM esiri n'okpuru CM10 isi nke na-enye anyị nkwụsi ike na ọsọ na-enweghị nha anya maka Google Nexus 7.
Tsunami X3.0, melite maka Samsung Galaxy S
Budata usoro ma melite ụdị ọhụrụ Tsunami rom, Tsunami X3.0 maka Samsung Galaxy S
Etu esi etinye foto foto Google na mkpebi dị elu
Iji foto nke kọntaktị HD anyị ga-agbanwe foto anyị nke kọntaktị Google maka ndị nwere mkpebi nke 256 mpx.
Samsung Galaxy S3, Rom NxTGen Rom 5.0
Ọzọ jelii agwa maka Samsung Galaxy S3, nke sitere na Samsung izizi gam akporo XXDLJ4
Samsung Galaxy S2, Rom Rootbox, ụdị ọhụrụ v3.0
Rom Vanilla nke atọ maka Samsung Galaxy S3 ụdị GT-I2 na GT-I9100P
Tsunami X2.5, melite maka Samsung Galaxy S
Anyị enweelarị ụdị ọhụrụ nke kachasị mma maka oge maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000, Tsunami X2.5
Vodafone Cloud, nchekwa na nchekwa igwe ojii
Vodafone sonyeere mgbanwe na atumatu anyị na onyinye anyị, dịka Movistar na Yoigo ma nyekwa ọrụ nchekwa akpọrọ Vodafone Cloud
Samsung Galaxy S3, Rom Omega V28 XXDLIH Jelii agwa
Omega V28 rom bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta maka Samsung Galaxy S3, dabere na gam akporo jelii agwa 4.1.2
Ezigbo bọọlụ 2013 dị ebe a
Ọhụrụ nkeji nkeji nke football saga mepụtara Gameloft na nke Falcao bụ ihe oyiyi, Real Football 2013, bụ ebe a.
RootBox Rom jelii agwa 4.1.2 maka Samsung Galaxy S2
Otu n'ime roms kacha mma maka Samsung Galaxy S2, nke kachasị ọhụrụ nke gam akporo 4.1.2
Facebook maka gam akporo, ngwa ngwa nke afọ 2012
Ọhụrụ Facebook nke gam akporo ga-adị tupu njedebe nke 2012, ọ ga-adị ngwa ngwa ma zubere ya dị ka ngwa amaala gam akporo
Samsung Galaxy S3 Rom Immortal V1.1 nke Dora Team gam akporo 4.1.1
Rom V1.1 na-adịghị anwụ anwụ maka Samsung Galaxy S3, usoro nbudata na usoro ntinye zuru ezu, nzọụkwụ site na nkwụsị na kernel Cleaner gụnyere
Njikwa Rom na Ota Updater na Tsunami x2.0
Tsunami x2.0 bụ otu n'ime romel jelii kachasị mma anyị nwere ike ịchọta maka Samsung Galaxy S, yana Rom Control na OTA Updater jikọtara na menu.
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X2.0, na-aga n'ihu anwansi
ROM tsunami X2.0 bu ihe ngosi Jelly Bean maka Samsung Galaxy S, otu n’ime ihe kachasi nweta na nke kacha di nma n’oge ahụ.
Google Nexus 7, Ngwaọrụ V2.0.0 ngwa ngwa niile
Ngwaọrụ V2.0.0 maka Google Nexus 7 bụ ngwa ọrụ ga-enye anyị ohere ịme ihe ọ bụla, site na ịwụnye Iweghachite iji gbanye ya.
Samsung Galaxy S2, Rom Mbilite n'ọnwụ Remix JB AOKP With Aroma Installer
Ihe ngosi na usoro ntinye nke Mbilite n'ọnwụ Remix V3.08 rom maka Samsung Galaxy S2 na gam akporo jelii agwa.
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X1.5, rom kacha mma na oge jelii agwa
N'oge a, m na-ewetara gị rom tsunami X1.5 rom, maka m kacha mma jelii agwa maka Samsung Galaxy S, ihe kachasị ọsọ ma rụọ ọrụ m gbalịrị
Ọdịnihu nke egwuregwu vidiyo vidiyo gam akporo na desktọọpụ desktọọpụ
Egwuregwu vidio dị na gam akporo na-egosipụta ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ, egwuregwu ọhụụ, ike ndị ọzọ na eserese ọdịnihu na mkpịsị aka gị
C-Rom Bean 1.8.0 maka Samsung Galaxy S GT-I9000 OTA
A gam akporo 4.1.1 jelii agwa si C-Rom team maka Samsung Galaxy S, C-Rom Bean 1.8.0
QissMe Rom, ụdị ndị ọhụrụ dị maka HTC, Motorola na Samsung
QissMe Rom bụ roms nwere ezigbo nlezianya mara mma ma rụọ ọrụ ruo oke, dakọtara na Samsung, HTC na Motorola.
Rom Jelly Bean Android 4.1.1 Codename 3.5.0 maka ngwaọrụ dị iche iche
Codename 3.5.0 bụ otu n’ime ROM ndị na - akwado ngwaọrụ ndị ọzọ, n’echiche n’azụ Cyanogen na AOKP.
Samsung Galaxy S, MackayRom V1.2.3 gam akporo 4.1.1
Ihe ntinye ohuru nke MackayRom V1.2.3, na-enwe ihe ịga nke ọma, na post a, m na-egosi gị vidiyo nke otu esi agbanye na Samsung Galaxy S
C-Rom Team CM10 maka Samsung Galaxy S OTA na Touchwiz
Ọzọ jelii agwa rom, nke sitere na CM10 maka Samsung Galaxy S. Ọrụ dị elu nke ga-emelite njedebe anyị na gam akporo 4.1.1
Esi gbanye mgbọrọgwụ na LG L3 E-400
Nzọụkwụ nzọụkwụ dị mfe iji gbanye ma wụnye ihe mgbake gbanwere ma ọ bụ mgbake ClockworkMod na LG L3 E400
Samsung Galaxy S, Rom Miui V4.1 jelii agwa Muchopoli83 mbipute 2.9.7
Oge kachasị mma maka Samsung Galaxy S, yana gam akporo 4.1.1 jelii agwa na ogo Miui roms.
UnlockRoot, ngwá ọrụ iji gbanye ọtụtụ ngwaọrụ
UnlockRoot bụ a free ngwá ọrụ Windows na nke anyị nwere ike mgbọrọgwụ ma ọ bụ unroot a otutu dakọtara ngwaọrụ.
Nkọwa doro anya maka nsogbu nke egwu abụọ na gam akporo, na-abụkarị ICS na Jelly Bean roms.
Official Android 4.1 jelii agwa melite na Samsung Galaxy Note na Tab
Gam akporo 4.1 jelii agwa na-abịa na Samsung ọhụrụ site na ndị ọrụ ROM
Ndepụta isi Spanish APNs
Usoro nhazi nke APN ohuru maka njikọ data nke ngwa mkpanaka gị
Samsung Galaxy S, Rom RemICS-JB V2.0 nke a na-eche ogologo oge
Ihe kacha mma Jelly Bean Rom maka Samsung Galaxy S, ihe atụ GT-I9000, rom a dị egwu sitere na Team RemICS team
Etu ị ga-esi weghachite ndabere folda EFS
Nkuzi vidiyo dị mfe iji weghachite folda EFS na gam akporo.
Etu esi enweta nchekwa EFS
Ntụziaka dị mfe iji nweta nnomi ndabere nke folda EFS
Otu esi eme ka gam akporo gi di ka Windows Phone na Launcher 7
Launcher 7 bụ Launcher ma ọ bụ replacementlọ dochie anya, nke anyị ga-eji wee nye anyị niile Windows Phone na ngwaọrụ Androd anyị.
Samsung Galaxy SII, Rom SuperNexus - I9100 - BUILD 2 gam akporo 4.1.1
Rom esitere na Samsung Galaxy Nexus maka Samsung Galaxy SII, na ụdị nke gam akporo 4.1.1 jelii agwa
Ihe mara mma nke gam akporo jelii agwa
Ihe eji egwu ohuru ohuru eji eme ka ichoputa ihe nlere nke gam akporo jelii agwa
Samsung Galaxy S, Rom MIUI Jelii agwa 2.8.24 site muchopoli83
Ihe kacha mma Miui jelii agwa maka Samsung Galaxy S, budata na otu esi etinye ya
Antiroid, chọta uzo ozo eji akwụ ụgwọ
Antiroid bụ webụsaịtị ewepụtara iji gosi anyị ụzọ ọzọ n'efu maka ngwa gam akporo a na-akwụ ụgwọ.
Ọbịa vs. Predator, ndị ọbịa mba ọzọ bịara gam akporo
Ọbịa vs. Predator egwuregwu ọhụụ ọhụrụ ebe anyị ga-achọpụta nke agbụrụ mba ọzọ ka ike
Samsung Galaxy S, Official Rom Android 4.1.1 RC10 si @elitemovil
Jdị Jelly Bean mbụ nke na-amata kaadị nchekwa dị na mpụga site na PC, dị ugbu a maka Samsung Galaxy S.
Samsung Galaxy S, Rom MIUI Jelii agwa 2.8.17 site muchopoli83
Usoro nwụnye nke Miui Rom mbụ na jelii agwa maka Samsung Galaxy S nlereanya GT-I9000
Sony Xperia J, Sony ntinye ntinye ohuru
A ga-egosipụta Sony Xperia J ọhụrụ na IFA 2012 ma kwe nkwa mma kachasị mma n'ime nso abanyela na akara Sony
Nigthly nke mbụ nke CyanogenMod 10 (Android 4.1.1) dị ebe a
CyanogenMod 10 Nigthly's dị maka ọtụtụ ngwaọrụ dakọtara
QissMe Rom, ihe ngosi Roms maka HTC, Samsung na Motorola
QissMe Rom bụ akwụkwọ akụkọ rom nke ndị China nwere ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ na ụdị eserese mara ezigbo mma.
Samsung Galaxy S, Rom X-Bean 1.0 nke XYunknown Android 4.1.1
A ọhụrụ jelii agwa maka Samsung Galaxy S, a rom na-agụnye ndị kasị mma nke AOSP na CM10
AR Magical Battle, eziokwu dịwanye elu na ụlọ elu ụlọ elu ọnụ
A ọhụrụ augmented eziokwu egwuregwu n'ihi na gam akporo na ụlọ elu-agbachitere ọcha na ahụmahụ ya
Samsung Galaxy S, ụzọ ọzọ iji wụnye ClockworkMod Iweghachite
Wayzọ ọzọ iji wụnye ClockworkMod Iweghachite na Samsung Galaxy S na-enweghị iji Odin
HTC One X emelitere na gam akporo 4.0.4
HTC ewepụtala mmelite maka Icewich Sanwichi 4.0.4 maka ndị ọrụ One X niile, na-ewebata ndozi dị mkpa.
New GlassRom V06.3 XXBLG1 maka Samsung Galaxy SIII (GT-I9300)
Etu esi wụnye GlassRom v6.3 ọhụrụ na Samsung Galaxy SIII
Otu gam akporo Jelii agwa V7.1 maka Samsung Galaxy S
Na nke a, m na-ewetara m ihe kacha mma jelii agwa maka Samsung Galaxy S, otu gam akporo Jelly Bean rom.
Samsung Galaxy SIII: Otu esi agbanye mgbọrọgwụ na mgbake na otu usoro
Mfe nkuzi iji mee mgbọrọgwụ na mgbake nke Samsung Galaxy SIII na otu nzọụkwụ
RecoverX, wụnye mgbake na ngwụcha Xperia
Tutorial iji wụnye gbanwetụrụ mgbake na a ọnụ ọgụgụ dị mma nke ọnụ nke Sony Ericsson Xperia nso na RecoverX
Mgbọrọgwụ gị ọnụ na Z4root
Z4root bụ ngwa maka gam akporo nke ga - enyere anyị aka gbanye ọtụtụ ọnụ. Nwere ike ibudata ya site n'aka ebe a n'efu.
WhatsApp maka gam akporo na-enweta mmelite
A tọhapụrụ ọhụrụ WhatsApp maka gam akporo nke gụnyere ndozi dị iche iche na atụmatụ ọhụrụ, yana ndozi izugbe.
Otu esi emepụta ndabere site na iji Titanium Backup
Video-nkuzi banyere otu esi emepụta nkwado ndabere na mweghachi na-esote site na iji Titanium Backup
Etu esi emepụta ngwa ngwa maka Heimdall
Ntụziaka dị mfe maka ndị ọrụ Heimdall iji mepụta ụlọ ọrụ onwe ha-flash firmwares.
Ihe ndi choro iji gbanye rom a esi esi na Samsung
Ndụmọdụ maka otu esi aga n'ihu mgbe ị na-etinye rom esiri esi na Samsung
Otu esi edozi GPS na Samsung
Mfe video-nkuzi iji hazie ma bulie GPS nke Samsung ọnụ ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Otu gam akporo Jelii agwa Samsung Galaxy S
Site na otu gam akporo Jelly Bean team, anyị ga-enweta rom kacha mma nke oge maka Samsung Galaxy S, arụmọrụ na ngwa ngwa rom.
Elite Team jelii agwa Rom maka Samsung Galaxy S
Beta 3 nke Jelly Bean rom maka Samsung Galaxy S nke ndị otu Elite na-emepụta.
RTVE na SuperPaquito, mbadamba umuaka nwere gam akporo
Ahịa gam akporo na-aga n'ihu ịgbasa na mbadamba ụmụaka emere maka uru nke ndị ọrụ pere mpe n'ụlọ
Etu esi wụnye Heimdall na Linux
Etu esi wụnye Heimdall ka ọ gbanye Samsung Galaxy ezinụlọ terminals si Linux sistemụ
Akpa rom jelii agwa site na DerTeufel1980 maka Samsung Galaxy S (GT-I9000)
Ntụziaka dị mfe iji mata Otu esi emelite Samsung Galaxy S gị na Android 4.1 jelii agwa site na iji rom nke DerTeufel1980 siri.
Etu esi wụnye ClockWorkMod Iweghachite na LG Optimus 3D
Ntụziaka dị mfe gụnyere ngwaọrụ niile, na otu esi etinye ClockWorkMod Iweghachite na LG Optimus 3D.
Esi gbanye LG Optimus 3D
Nkuzi bara uru banyere otu esi agbanye LG Optimus 3D ụzọ dị mfe iji Windows PC na ngwa Megatron.
Etu esi eme ka ngwaọrụ gam akporo na iTunes
Etu esi emekọrịta ngwaọrụ gam akporo na iTunes na DoubleTwist Player, ngwa anaghị akwụ ụgwọ maka gam akporo, Mac na Windows
Etu esi wụnye mgbake na Samsung Galaxy Tab p1000n
Etu esi wụnye ClockworkMod Recovery na Samsung Galaxy Tab p1000n
Etu esi agba Heimdall na Windows
Nkuzi banyere otu esi esi wụnye Heimdall na Windows. Heimdall bụ usoro ihe omume ọzọ na odin nke ga - enyere anyị aka ịgbanye GT-i9000
Ndị nyocha na-ahụ ebili nke malware na gam akporo
Firmlọ ọrụ nchekwa Trend Micro dọrọ aka na ntị na nkesa nke malware na gam akporo ga-esiwanye ike na njedebe nke afọ.
Etu esi wụnye Ubuntu na ngwaọrụ gam akporo gị
Nkuzi banyere otu esi ebudata ma wụnye Ubuntu na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo
Esi Flash Samsung Galaxy tab 7 ″ na Mmeri usoro
Etu esi gbanye Samsung Galaxy tab 7 "ma ọ bụ p-1000 ka Android 2.3.3, gbanye ya wee wụnye ihe mgbake gbanwere.
Samsung Galaxy S 3, otu esi gbanye ma wụnye ClockworkMod Iweghachite na otu nzọụkwụ
Mfe nkuzi iji wụnye ClockworkMod Iweghachite na Samsung Galaxy S 3 site na 3.04 dị mkpa
Samsung Galaxy S, Rom Gnex Stock 1.4.1 Android 4.04 nke Elite
Pure Stock Gnex 1.4.1 bu ihe ohuru nke Elite rom maka Samsung Galaxy S ma obu GT-i9000.
Zute nsụgharị doro anya nke Google Chrome, maka jelii agwa na ICS
A na-emelite Google Chrome ka ọ bụrụ nsụgharị sitere na beta, site na Android 4.0 gbagoro, na-enye nnukwu ọsọ
Android 4.1 agaghị akwado Flash Player
Adobe ekwuputala na android 4.1 jelii agwa agaghị enwe nkwado maka Flash Player ma kwụsịlata nbudata ya na Google Play.
Nexus Q budata ọdịnaya gị site na Google Play na ihuenyo na ndị ọkà okwu
Google na - eweta Nexus Q, otutu ulo oru ihe omuma nke a na - ejiko aka na Google Play igwu egwu na vidio na igwe okwu na onyonyo
Zute atụmatụ ọhụrụ 9 nke gam akporo 4.1 jelii agwa
Anyị na-akọwa isi akwụkwọ akụkọ itoolu nke gam akporo 4.1 jelii agwa gụnyere, gosipụtara na nzukọ Google I / O
CyanogenMod 9 na-ebupụta RC mbụ ya maka ọtụtụ ngwaọrụ
CyanogenMod 9 ka malitere oru gam akporo 4.0 RC nke mbu ya maka ezigbo onu ogugu gam akporo.
Otu esi emelite Samsung Galaxy Tab 7 ″ (p-1000) na gam akporo 4.0
Etu esi melite Samsung Galaxy Tab na gam akporo 4.0.4 site na ikpuchi CyanogenMod 9 Nigthly Builds rom.
Etu esi gbanye ma wụnye mgbake ClockworkMod na Samsung Galaxy tab p1000
Nzọụkwụ nzọụkwụ site na iji ihe oyiyi gbanye ma wụnye ClockworkMod Iweghachite na Samsung Galaxy Tab, p1000 nlereanya
Rom ICS F4k MOD v4.0.4 r4 IMM76I na Linaro maka Samsung Galaxy S
F4K na-enye anyị rom nke mbụ maka Samsung Galaxy S yana mmelite nke koodu Linaro.
Esi Flash Samsung Galaxy Obere usoro na odin multi-Downloader
Video-nkuzi banyere otu esi agbanye Samsung Galaxy mini usoro nke smartphones na odin multi-downloader.
Qiss me you ohuru na mgbanwe roms
Qiss me are roms roms nke China sitere maka ngwaọrụ gam akporo dị iche iche, gụnyere Galaxy S
Esi Flash Samsung ọnụ na gam akporo sistemụ
Sammobile bụ ibe weebụ raara nye ngwaọrụ Samsung niile, nke anyị nwere ngwaọrụ niile na-egbu maramara dị.
MiHome, onye na-ebunye MIUI na Google Play
Otu mmepe nke ewu ewu MIUI ROM ewepụtala ụlọ ọrụ gọọmentị ụlọ ha n'otu n'otu na Playlọ Ahịa Google.
Etu esi melite Samsung Galaxy S na CM9 n'abali
Correct usoro imelite Samsung Galaxy S na nsụgharị ọhụrụ nke CM9 n'abalị.
Etu esi wụnye APK na Windows site na iji igwe arụmọrụ na gam akporo SDK
Video-nkuzi banyere otu esi etinye ngwa gam akporo na Windows, maka nke a, anyị ga-eji gam akporo SDK na Ms-dos terminal.
THD N2-A, MacBook oyiri na Ice Cream Sanwichi
THdị THD N-2 bụ otu akwụkwọ nke MacBook nke na-eje ozi iji nye ụdị laptọọpụ mara mma ma rụọ ọrụ, na-agba ọsọ n'okpuru gam akporo 4.0
Final Fantasy Dimensions, ọrụ kachasị mma na-abịa na gam akporo
Saga ama ama nke Japanese RPG Final Fantasy na-abịa na gam akporo na Final Fantasy Dimensions, isiokwu nwere ihe ndị mmụọ nsọ FF I, IV na V dere
MOD TouchWiz 4 Launcher v2 - GB, CM7, ICS maka Samsung Galaxy S
TouchWiz Launcher 4 V2 maka Samsung Galaxy S, ngwugwu nwere ihe nrụpụta gbanwere site na mgbake.
Esi iulateomi gam akporo na Windows
Mfe nkuzi iji nwee ike iulateomi gam akporo na Windows, na-etinye igwe arụmọrụ site na gam akporo SDK Manager.
Etu esi wụnye gam akporo SDK na Windows 7
Mfe vidiyo-nkuzi banyere otu esi esi wụnye gam akporo SDK na Windows 7, wee wụnye igwe arụmọrụ.
Esi mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S2
Bara uru nkuzi na ihe niile ị chọrọ iji gbanye Samsung Galaxy S2, ma ọ bụ makwaara dị ka GT-i9100.
Androidsis Official App dị na Storelọ Ahịa Play
Premiere na Storelọ Ahịa Play nke ọhụụ ọhụrụ androidsis ngwa, nke ị nwere ohere ịnweta blọọgụ androidsis.com
Remics-UX the rom kacha mma maka Samsung Galaxy S
Remics-UX bụ rom kacha mma maka Samsung Galaxy S, dabere na CM9 kwa abalị yana ọtụtụ mods nke Samsung Galaxy SIII.
Samsung gosipụtara Music Hub na Spain, naanị na Galaxy S III
Na Music Hub, ụlọ ọrụ Korea bụ Samsung ga-anwa ịsọmpi iTunes na Spotify na ngalaba nke egwu site na nkwanye.
Esi mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S3
Nkuzi bara uru site na onyonyo etu esi ewepụ Samsung Galaxy S3, n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Samsung Galaxy S, otu esi edozi ọtụtụ nsogbu emechiri emechi
Otu esi edozi nsogbu oghere na mmanye emechi na ICS roms na Samsung Galaxy S. Nke a na-abụkarị nsogbu nkebi data data
Etu esi wunye ClockworkMod Recovery na Samsung Galaxy R i9103
Nzọụkwụ nzọụkwụ site na ntinye iji wụnye mgbake na Samsung Galaxy R ma ọ bụ makwaara dị ka GT-i9103
Budata rom Samsung Galaxy S Doc's Master ICS V12
Download Doc's Master ICS V12 rom na usoro ntinye ntinye ya maka Samsung Galaxy S.
Samsung Galaxy S3 zuru femụwe dị
Femụwe zuru ezu nke Samsung Galaxy S3 dị, nke ndị mmepe ga-ebupụta ngwanrọ ha na ekwentị ndị ọzọ
Esi kpọghee Samsung Galaxy mini kpamkpam n'efu
Mfe nkuzi imeghe Samsung Galaxy mini maka n'efu, na-enweta na usoro ọnụọgụ ọnụọgụ asatọ
Budata S-Voice maka Samsung gị na gam akporo 4.0
XDA ebipụtala .apk nke S-Voice nke Samsung Galaxy S3 maka Samsung fọdụrụ na gam akporo 4.0
Samsung Galaxy S, otu esi agbanwe modem na ICS dabere na roms
Ntụziaka dị mfe iji gbanwee modem dị na Samsung Galaxy S, ma ọ bụ nke a makwaara dị ka GT-I9000, gụnyere ngwaọrụ niile dị mkpa maka mmemme ahụ.
Etu esi gbanye ma wụnye ClokworkMod Iweghachite na Huawei u8650
Etu esi gbanye ma wụnye ClockworkMod Iweghachite na Huawei u8650, nkuzi nkuzi site na ntinye na onyonyo.
Otu Igwe Igwe Igwe: Huawei U8650
Rom maka Huawei u8650 nke dabere na gam akporo 2.3.5, rom nke na-enye gị ọsọ ọsọ na-enweghị atụ na ahụmịhe mmetụ.
Huawei u8110, olee otu iji gbanye ma wụnye ClockworkMod Recovery
Nkuzi bara uru iji wụnye ClockworkMod Iweghachite ma gbanye Huawei u8110, tinyere ngwaọrụ niile dị mkpa.
Samsung Galaxy S, otu esi edozi nsogbu Viber na ICS roms
Ihe nkuzi bara uru maka ndị ọrụ ICS roms na Samsung Galaxy S. Site na ịdezi faịlụ build.prop, anyị ga-enweta Viber ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Etu esi emeghe Samsung Galaxy S na Samsung Galaxy SII na Galaxy S Unlock
Nzọụkwụ nzọụkwụ na-emeghe ụdị ekwentị dị iche iche nke Samsung Galaxy S ezinụlọ, na-eji Galaxy S Unlock, App n'efu site na Storelọ Ahịa Play.
Esi mgbọrọgwụ gị gam akporo ọnụ na SuperOneClick
Na SuperOneClick, anyị ga-enwe ike mgbọrọgwụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke gam akporo ngwaọrụ na a nnọọ mfe ma dị mfe n'ụzọ.
Samsung Galaxy S, Rom Ọchịchịrị Knight 5.5
Kacha ọhụrụ na Dark Knight ICS Android 4.0.4 rom update maka Samsung Galaxy S.
Onye na-ese n'elu mmiri Player, Pop-up Play video playback
Player sere n'elu bụ ngwa ọhụụ na - enye gị ohere ịnụ ụtọ ọkpụkpọ Pop-Up Play nke Galaxy S3 na ekwentị ọ bụla.
DX Battery Booster, na-achịkwa batrị gị
Battery Booster bụ ngwa sitere na Storelọ Ahịa Play nke ga-enyere anyị aka na oriri na ndozi nke batrị gam akporo anyị.
Mgbasa ozi na Ogwe ngosi? Idozi ya na AirPush Detector
Etu esi ewepu mgbasa ozi na mgbasa ozi na-egosi na ngosi ngosi gam akporo na AirPush Detector, nke na-achọpụta mmemme mmemme
Samsung Galaxy S, otu esi etinye Rom na ụzọ dị ọcha
Samsung Galaxy S, usoro ị ga - agbaso iji mee nhicha dị ọcha nke Rom, nkuzi nzọụkwụ site na ntinye na onyonyo.
Egwuregwu mgbapụta na-ewelite ọtụtụ na Galaxy S3
Samsung's Pop-up Play na-enye ohere ka Galaxy S3 lee vidiyo n’elu ngwa anyị chọrọ iji, dị ka obere windo
Hacker na-ebipụta Google Play na-enweghị nchebe mpaghara.
Taa na Intanet, ewepụla ihe mgbochi mpaghara niile dị ugbu a. Nwere ike ikwukọrịta, kekọrịta ihe ọ bụla, kwuo okwu, lelee, wdg. nye onye obula n ’uwa obula. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ gam akporo ji eche ihe kpatara mpaghara mpaghara Google Play (ahịa ochie) ka dị. Maka ndị gị na amabeghị ya, enwere ngwa nke, dabere na mba ị si jikọọ, dị ma ọ bụ ibudata.
Rom Samsung Galaxy S gam akporo 4.0.3 Elite 9.1 (ICS)
Olee otú mmezi-ukara melite Samsung Galaxy S ka Android 4.0.3 iji J.Randall Rom, kpọmkwem 9.1.
Samsung Galaxy S, melite site na odin na femụwe 2.3.6 na CF Root
Ntụziaka dị mfe kọwara site na nzọụkwụ na ihe oyiyi iji melite Samsung Galaxy S na gam akporo 2.3.6 JVU.
Iri oke batrị? Nkọwa na azịza ya.
N'isiokwu taa, a ga m enye gị nkọwa nke otu n'ime ihe ndị nwere ike ịkpata (ọtụtụ oge) yana ihe ngwọta maka nsogbu nke oriri batrị dị elu na mberede. N'ikwu ya, isi ihe kpatara nsogbu ahụ batrị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kpatara CPU.
Nnukwu anụ mmiri: Obi dị gị ụtọ na nkwụ nke aka gị
Nnukwu anụ ọhịa shooter bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke ukwuu na-emegharị aka na-emegharị onwe anyị iji megharịa onwe anyị na ntọala ngosipụta nke ọma
Mmelite: Baseball Superstars 2012 n'efu maka gam akporo
Gamevil ka emelitere Baseball Superstars 2012 na ọhụrụ nnọọ ọwọrọiso ndozi graphically na gameplay, ị nwere ike ibudata ya na free si gam akporo ahịa
Scalado Wepụ, wepu ihe ndị achọghị na foto gị.
Na Scalado Wepụ anyị nwere ike iwepu ihe ndị anyị achọghị na foto ọ bụla. Naanị anyị na-ese foto ma metụ ihe ndị anyị na-achọghị ịpụta. Yabụ anyị nwere ike iwepụ ndị mmadụ, ihe, anụmanụ, wdg na-agagharị ma kpasuo foto anyị mere.
Ọpụpụ Live Akwụkwọ ahụaja: A minimalist wallpaper for your Android
Ọpụpụ Live Akwụkwọ ahụaja bụ animated ndabere maka gam akporo, na a zuru okè minimalist ịke iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ na ya otutu customization ntọala.
Jelii agwa gam akporo 5.0 Maka nkeji nke abụọ nke 2012?
Google bu n'obi iji mee ka ngwa n'ichepụta usoro nke jelii agwa 5.0, o gunyere njikọta na Windows 8 ka anyi wee nwee obi uto na nyiwe
Obodo Smurf: Obodo Smurf na gam akporo gị
Ihe odide niile na-acha anụnụ anụnụ site na nwata wee bia gam akporo! Will ga-enwe ike icheta obodo nke pifufos na gam akporo gị iji mee ka ọ too ma mee ka ọ nwee ọganihu.
CPSEmu: ulateomie kpochapụwo Capcom egwuregwu na gị gam akporo
CPSEmu emulator maka ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ, ị nwere ike igwu ndị ochie dị ka Street Fighter si gị ama enweghị enweghị ike kọmputa.
Sgwé ojii & Atụrụ: Na-elekọta gị nke ìgwè ewu na atụrụ nke gị gam akporo
Sgwé ojii & Atụrụ bụ egwuregwu mbụ na nnukwu akụkọ, anyị nwere ike ilekọta atụrụ nke anyị, nye ha nri, mee ka ha too
Zenonia 4: Nlaghachi nke akụkọ mgbe ochie maka gam akporo gị
Zenonia 4 laghachi na gam akporo oge a na eserese kachasị mma na visuals, agbakwunyela usoro PVP yana rụzuru ọhụụ
Google kwadoro ka ị ghara iji Google Wallet na ngwaọrụ ndị gbanyere mkpọrọgwụ
Otu ụlọ ọrụ achọpụtala nsogbu na nchekwa Google Wallet na ngwaọrụ niile gbanyere mkpọrọgwụ.
NightClub Akụkọ na-abịarute ọzọ site n'aka TeamLAVA maka gam akporo
TeamLAVA enwetakwala ọrịre ahịa ọzọ ọzọ n'ihi usoro egwuregwu ya n'ịntanetị, na NightClub Akụkọ, anyị nwere ike ịmepụta ụlọ ịgba egwu nke anyị.
1Weather achọpụtazi ihu igwe si gị gam akporo na a minimalist ịke
1Weather bụ a minimalist style ngwa maka ihu igwe ịkọ amụma na android, anyị nwere ike ịchịkwa ihu igwe, iru mmiri, mmiri ozuzo na sekọnd ole na ole
TouchPal: Ihe kachasị mma na Swype na gam akporo
Mbara igwe TouchPal bụ ihe kachasị mma maka Swype, obi abụọ adịghị ya na keyboard dịgasị iche na ihe ijuanya na ngwa ngwa, yana enyemaka bara ụba nke amụma ederede zuru oke
Bulite otutu faịlụ na igwe ojii na Box na ES Explorer
Ugbu a na Igbe igwe ojii faịlụ sistemụ na ES Explorer onye njikwa faili maka gam akporo anyị nwere ike bulite ọtụtụ faịlụ site na ama anyị